Litmus: လူတွေကမင်းရဲ့အီးမေးလ်ကိုတကယ်ဖတ်နိုင်သလား | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 21, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မိုဘိုင်းဖုန်းကိုနောက်ကျပြီးမှအော်ဟစ်နေကြတာပါ၊ မင်းတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ဒီနေ့သင်လုပ်နေတာတစ်ခုရှိပါကလူများသည်၎င်းတို့အမှန်တကယ်ဖတ်နိုင်၊ မနိုင်ဆိုတာသင့်အီးမေးလ်ရောင်းချသူမှသင်ပို့လိုက်သောအီးမေးလ်များကိုစမ်းသပ်သင့်သည်။
ငါတို့အတွက်အဓိကအီးမေးလ်တင်းပလိတ်များတီထွင်ခဲ့သည် WordPress ဖြေရှင်းချက်အတွက်အီးမေးလ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပြန်လည်တုန့်ပြန်သောအီးမေးလ်ပုံစံကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ CircuPress သည်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးအီးမေးလ်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာမလွယ်ကူပါ။ ကျနော်တို့အချို့နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် Zurb မှအခမဲ့တုံ့ပြန်နိုင်သောအီးမေးလ်တင်းပလိတ်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ CircuPress လိုအပ်ချက်၊ နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်အီးမေးလ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်သူများကိုစွန့်လွှတ်ပြီးငှားရမ်းခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအီးမေးလ် ကလုပ်ဖို့။ Email Monks တွင်လှပပြီးအကောင်းဆုံးသောအီးမေးလ်ပုံစံ ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဒီဇိုင်းမရှိသေးပါက၎င်းတို့ site ကိုတိုက်ရိုက် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်တင်းပလိတ်များနှင့်အတူ, အီးမေးလ်ဘုန်းကြီးများလည်းငါတို့နှင့်အတူထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် Litmus သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် မိုဘိုင်းနှင့်ဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်တစ်ခုစီ၏မျက်နှာပြင်များကိုပြသပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို နှိပ်၍ ချဲ့နိုင်သည်။
အခွင့်အလမ်းတွေကသင်ဟာများစွာသောပစ္စည်းတွေမှာဖတ်လို့မရအောင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုဖြုန်းတီးဖို့အတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးသုံးနေတာပဲ။ လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်သူတို့၏မိုဘိုင်းကိရိယာတွင်အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးနေသည်နှင့် - တုန့်ပြန်မှုမရှိဘဲသင်၏ခေတ်နောက်ကျနေသောဇယားကွက်သည်အမှိုက်ပုံးထဲသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်ပါ အချစ် ကြည့်ရန်!
Tags: အီးမေးလ် (Android)အီးမေးလ်ဒီဇိုင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်ဘုန်းကြီးများအခြွေအရံ ၂၀၀၈အခြွေအရံ ၂၀၀၈ဂျီမေးလ် (Android)Gmail (ဒက်စ်တော့)ဂျီမေးလ် (iOS)ဂျီမေးလ် (မိုဘိုင်း)Hotmail (Desktop) Hotmail (မိုဘိုင်း) Thunderbirdlitmusတိုက်ရိုက်မေးလ်စာ (iOS)စာ (OSX)Outlook နဲ့ 2003Outlook နဲ့ 2007Outlook နဲ့ 2010Mac အတွက် Outlook 2011Outlook နဲ့ 2013Outlook Expressတုံ့ပြန်မှုအီးမေးလ်Sparrow (ဒက်စ်တော့)စာစာ (iOS)Windows မေးလ်Yahoo Mail (ဒက်စ်တော့)Yahoo Mail (မိုဘိုင်း)
Commun.it: လွယ်ကူသော Twitter ကွန်မြူနတီစီမံခန့်ခွဲမှု
22:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 6, 21
အလို!! ပို့စ်ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက် လုံးဝကို ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပို့စ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ငါ့အတွက် အသုံးဝင်တယ်။